All About chinchi ke iOS 9 Beta na Ị Mkpa Ịmata
Na July 2015, anọ beta maka iOS 9 a tọhapụrụ ya. Nke a beta na-azọrọ na idozi ihe nchinchi na mma kwụsie ike karịa na mbụ betas mere. Dị ka Apple, iOS 9 kwesŽrŽ m ọzọ mụ karịa ma nke ya abụọ gara aga releases, iOS 7 na iOS 8. ụfọdụ ndị na-abịa na iOS 9 bụ ịrịba Siri ndozi, njem ọha na eze data maka Apple Maps, edeturu ndozi, wdg
iOS 9 Mgbanwe
Ọhụrụ beta version nke iOS 9, ọhụrụ mgbanwe na ahụhụ fixes abịa. Nwere anya na ha!
Ọhụrụ beta version nke iOS 9, kwụsie ike na-akakwa mma. Ka ihe atụ, ahụhụ nke News App n'iyi mgbe oghere bụ ofu.
I nwere ike iri photos na olu button ọzọ.
Dị ka e kwere ná nkwa site Eddy Cue, Home Ịkekọrịta maka Music bụ azụ ọzọ.
Mgbe na-agbanwe agbanwe nghazi Ozi ihuenyo ga redraw ka otu akara. Ugbu a, na ihuenyo agbanwe n'ụzọ ziri ezi.
Apple si Pọdkastị ngwa ugbu a na-akwado Foto dị na-na-Foto dị mma mgbe egwu na-akpọ video na multitasking on iPad.
Ị nwere ike iwepu Bing Web Results na Chakwasa ihie Search ntọala
Arụ Ọrụ egosi kwagara n'akụkụ aka nri mgbe Back button site na ndị ọzọ ngwa ọdịnala bụ ugbu a.
Oyiyi na-emelite maka iPhone, Apple Watch on Battery wijetị.
Na ntọala ngwa, na akara ngosi na-anọchite anya ngosi ọnọdụ e emelitere na a uhie ọhụrụ agba. Akara ngosi batrị nwekwara e ofu na ugbu a ka mechie n'ọnụ kama square n'ọnụ ya.
The Handoff atụmatụ e mbụ egosipụta n'ime ngwa carousel. Ugbu a, App Switcher e kwagara na ala nke ngwa-ịmafe interface. Sere n'elu na ọhụrụ Handoff mmanya imeghe ngwa.
E nwere ihe ọhụrụ nhọrọ maka Apple Ṅaa na ntọala ngwa. Nke a na nhọrọ na-ahapụ gị gbanyụọ atụmatụ na-enye ohere Apple Ṅaa ga-enweta Site na Ihuenyo na mmadụ abụọ click.
Na ọbụna ndị ọzọ!
iOS 9 Kasị njọ chinchi
N'ụzọ dị mwute, e wezụga ọhụrụ jụụ mgbanwe, ọhụrụ beta version abịa na ụfọdụ chinchi, kwa. Ma, anyị nwere bee mmepe ụfọdụ slack apụ. Nke a bụ beta otu ugboro ọzọ, na chinchi ga-abụ na e nwere. Lee ndị 10 kasị njọ iOS 9 beta chinchi.
iOS 9 abịa na ịtụnanya proactive n'ụlọ ihuenyo na-anọdụ n'aka ekpe nke gị isi n'ụlọ ihuenyo. Ma, mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-swipe n'elu a na ihuenyo nwere ike na-egosi oghere.
Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-ahapụ WiFi na na ahụ na-agbalị ka ịgbanwee gaa na cellular data, ị ga-enwe ike.
Ụfọdụ ngwa nwere ike na-previewed na odida obodo mode. Mgbe ị na-ịgbanwee gaa na Eserese mode, echiche ga-mekotaonwe na ngwa ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ọtụtụ ọrụ mkpesa na mkpumkpu ndụ batrị.
iOS 9 Ọnọdụ Ogwe mgbe ụfọdụ na-egosi na-ewe kwa ogologo pụọ mgbe ị na-emeghe na ngwa.
Minor nke bụ oge. Ọtụtụ ọrụ na-ekwu na oge adịghị na-egosipụta na ugbu a oge na ha na ọnọdụ.
Ọzọ iOS 9 nsogbu bụ mgbe nile arịrịọ ka banyere na iTunes Store.
Ndị ọrụ na-bịanyere aka elu maka iOS 9 ọha beta na-adịghị ahụ ọha na eze iOS 9 update.
Iji ụfọdụ ngwa nwere ike ime ka ngwaọrụ kpọgidere na respring.
App Switcher nwere lag na igansu mbipụta.
Akuko a Bug on iOS 9 Beta
Ọ bụrụ na ị na-abịa gafee a ahụhụ, ị ​​kwesịrị ị na-akọ ya Apple. Ebe a bụ otú.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta a ahụhụ na gị iOS 9 Beta, na-a screenshot. Na-a screenshot pịa n'ụlọ na ike buttons n'otu oge.
iOS 9 abịa na a ọhụrụ ngwa. The ngwa bụ Apple si Nzaghachi nnyemaaka. Ị kwesịrị ị na iji nke a ngwa ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị faịlụ ọ bụla ahụhụ akụkọ. Mgbe ị malite ngwa ị ga-banye na ihe Apple ID. Kwesịrị, ị kwesịrị ị na-eji otu Apple ID na bụ na iOS ngwaọrụ ebe ahụhụ ahụ pụtara. Otú a, Apple ga-enwe ike sochie na gị.
Ozugbo ị banye, ị ga-achọpụta na ikpegara bọtịnụ na n'elu-nri akuku. Họrọ Atiya na nke ahụ bụ kacha adabara gị nke. Jide n'aka na-enye ihe dị ukwuu nkọwa dị ka o kwere mgbe dejupụta ụdị.
Ị Ga-nweta nkwalite ka iOS 9 Beta?
Ọtụtụ ndị nwere obi abụọ mgbe ọ na-abịa upgrading ka iOS 9 Beta. N'ezie, ihe kasị ihe mere upgrading ka iOS 9 bụ n'ihi na nke ọhụrụ ịtụnanya atụmatụ. iOS 9 Beta nwere ọtụtụ ihe na-enye, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ ka na bụ a beta. New Akara ókwú, ịke, ngwa ... ọhụrụ ihe niile.
Ma, mgbe ahụ, ị ​​na-ahụ okwu beta mgbe niile. Na fọrọ nke nta ọ bụla maara na beta pụtara adọkpụ. Nke a na-aga n'ihi iOS 9 kwa. Ebe ọ bụ na iOS 9 bụ ka a na-arụ ọrụ na-aga n'ihu, glitches na chịnchị-kpam kpam nkịtị ihe. Mmepe mere ka nke a beta na-adọ oghe maka ọha otú ha nwere ike dị ka ọtụtụ reviews dị ka o kwere omume, na ọgwụgwụ iOS ọrụ ga-ejedebe na a polished ikpeazụ ngwaahịa.
Oké ihe banyere iOS 9 bụ na ọ bụ ndị ọzọ ahaziri. Ọ na-abịa na-akpali ngwa na-akpọ "proactive." Proactive bụ n'ezie ọhụrụ, mma iOS 8 Chakwasa ihie Search. A na ngwa nakọtara data si dị iche iche ngwa ọdịnala ma na-enye nri Ama na nri oge. Proactive ga-enyere iOS ọrụ na-aga ọkụ ọkụ schedules ndụ ha n'okpuru akara.
Ò anyị kwuru Siri? Siri na-ukwuu mma mgbe tụnyere iOS 8. Nke a bụkwa otu n'ime uru ndị na-ị ga-esi mgbe eji iOS 9.
E wezụga Siri, na iOS 9 Apple Maps ndị ọzọ dị ike karịa mgbe. Apple Maps abịa na mgbakwunye na nke n'ụzọ direction, ụgbọ ala, ụgbọ okporo ígwè na ndị ọzọ na njem ọha na eze data. Isi nke mmasị nwere ike pụta ìhè, na i nwere ike iji 3D nkewa dị ka mma. Ị ga-enwe ike inwe ị na-aga ngwa ngwa na iOS 9 n'ihi na ugbu a, ị pụrụ ịhụ n'okporo ámá n'ụzọ doro anya.
Ebe ọ bụ na iOS 9 Beta bụ ka na-amalite amalite ọtụtụ tech ọkachamara nwere ike ikwu na-eche ezigbo ihe. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na ndị a na-ejighị n'aka iOS nsụgharị pụrụ n'ezie ọgbaghara ngwaọrụ gị na-adịgide adịgide. Kama nke ahụ, i nwere ike na-eche maka ukara polished version nke iOS 9.
> Resource> iPhone> All About chinchi ke iOS 9 Beta na Ị Mkpa Ịmata